AbeSundowns banifisela impelasonto yePhasika enhle nephephile - Impempe
AbeSundowns banifisela impelasonto yePhasika enhle nephephile
URicardo Goss ongunozinti weMamelodi Sundowns
Njengoba kuyimpelasonto yePhasika kuyaziwa ukuthi ziningi izinto ezenzekayo futhi kugcina kudlule nemiphefumulo yabantu abaningi.
Yingakho noMengameli wezwe, uCyril Ramaphosa, ethathe isinqumo sokuthi bungathengiswa utshwala ngale mpelasonto, bese kuphinde kube nokuqaphela kakhulu nasemasontweni ngoba iCoronavirus ayikapheli. Emigwaqweni kuzoqiniswa umthetho kakhulu ukuze kube nesiqiniseko sokuthi azibi khona izingozi ezingenasidingo nebezingagwemeka.
AbeMamelodi Sundowns abasalanga ngaphandle njengoba bethathe isikhathi sabo beluleka abantu ngokuziphatha kahle nokuthi impelasonto ibe yinhle ize idlule bephephile.
“Umlayezo wethu wempelasonto Masandawana ukabili. Okokuqala isikhathi sokukhumbula, siyazi ukuthi le mpelasonto isho ukuthini kubantu abaningi abakholwayo emhlabeni wonke. Isibonakaliso sesimangaliso esenzeka ngokuthi uJesu Krestu abethelwe, nokuvuka kwakhe ethuneni. Kuphinde kube yisibonakaliso sothando uMdali analo kithina sonke, njengoba anikela ngendodana yakhe kukuphela kwayo.
“Okwesibili ukuthi sazi kahle njengabantu baseNingizimu Afrika ukuthi kunezibhicongo esingafuni ukuzikhumbula, ngoba zisilethele usizi olukhulu. Ngakho umlayezo wethu uthi asenze isiqiniseko ukuthi sifika siphephile lapho siya khona, asishayeli siphuzile. Okunye akumele sikhohlwe ukuthi sisabhekene nobhubhane (iCoronavirus) ngakho kumele silandele yonke imigomo ebekiwe. Kumele sizame ukugwema ukuhlangana sibe baningi, futhi uma singaphandle senze isiqiniseko ukuthi sigqoka izifonyo zethu. Kumele siwashe nezandla ngoba kubalulekile ukuthi sidlule kulesi sikhathi esinzima. Yilowo umlayezo wethu…singathi nje sinithanda nonke emakhaya,” kusho uRulani Mokwena ongumqeqeshi weSundowns.
NoRicardo Goss ongunozinti wamaBrazilians akasalanga ngaphandle njengoba ethe: “Nginifisela impelasonto yePhasika enhle. Ngiyanicela ukuthi nilandele yonke imigomo ebekiwe ukuze sivikele iCovid-19. Okunye futhi ukuthi ngicela nishayele kahle, ningashayeli niphuze amponjwana. Nginithanda nonke emakhaya.”
Previous Previous post: BENZANI MANJE?: USguda usekhiqize asebedlala kwiPSL ngenkulisa yakhe
Next Next post: ULebese usesayinwe yiTshakhuma